Safiirka Shiinaha Ee Soomaaliya Oo Ka Warbixiyay Taariikhda Soo Jireenka Ah Ee Ka Dhexesya Labada Dal – Great Banaadir
Laga soo bilaabo tan iyo markaas dadka Soomaaliya iyo Shiinaha waxaa ay lahayeen xiriir saaxiibtinimo isweydaarasi ah, markii badmaaxiyadii reer Shiina ay yimaadeed Muqdisho waxay aheyd magaalo ku caan ah ganacsiga xiligaasi guud ahaan Waddamada Bariga Afrika iyo Soomaalida gudaheeda.
Bishii July sanadkii 1960-kii Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday in ay qaadatay Xornimadii, Dalalka Dunida waxay aqoonsadeen Xornimada Soomaaliya. Bilo kadibna Shiinuhu waxaa uu aqoonsaday Xornimadda Siyaasadeed ee Soomaaliya tan iyo markaasna Soomaaliya iyo Shiinaha waxaa ka dhaxeeyey isku socod Saaxiibtinimo. Dowladda Shiinahu waxaa ay dhowrtay oo ay adkeysay Madaxbanaanida, Dhulka iyo Xornimada Siyaasadeed ee Soomaaliya, waxana kala dhexeeyey Xiriir Walaaltinimoo dhow Soomaaliya.
Soomaaliya waa Waddankii ugu horeeyey ee ku yaala Barriga Afrika oo Cilaaqaad Diblomaasiyadeed la yeesha Shiinaha. Shiinahuna waxaa uu Soomaaliya la wadaagayey Xiriir Saaxiibtinimo oo soke, waxaana ay horumarisay Cilaqaadkii wanagsanaa ee ka dhexeeyey Labadda Dal oo ahaa mid muhiim u ah Shiinaha.
Tan iyo markii uu abuurmay Xiriirka Diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyey Shiinaha iyo Soomaaliya waanu ka faa’iidnay labadeena. Is-xulufaysigu iyo Kaashigu waxaa uu soo xoogeystay tan iyo 1944 ilaa1971. Soomaaliya waxay si buuxda Shiinaha ugu taageertay dib ula soo noqoshada Kursigii Qaramada Midoobay ee Dal Weynaha Shiinaha waxaana kula jiray Dalal Afrikaan ah.
Shiinuhu Qadarin aad u sareysay ayuu u hayaa Soomaaliya tan iyo 1991. Shiinahu waxa uu Taageero ballaaran iyo Caawinaad siinayey Soomaaliya iyo Xiriirka Labo Geesoodka ah, waxaana uu ku dadaalayey Horumarinta Nabadda, Xasiloonida iyo Barwaaqada Soomaaliya.
Dhaqaale ahaan Qarnigii u dambeeyey Shiinuhu waxaa uu Soomaaliya ka caawinayey siday dib ugu dhisan lahayeen Kaabyaasha Dhaqaale sida Waddooyinka, Warshadaha iyo Buundooyinka iskuxira Waddooyinka Soomaaliya oo dhan. Si kor loogu qaado wax Soosaarka Dhaqaalaha, waxaana xoogeysanayey Xiriir Walaaltinimo ee Soomaaliya iyo Shiinaha ka dhexeeya.
Shiinuhu wuxuu dardargalinaya in uu kor u qaado Dhaqaalaha Caalamka, gaar ahaan Xaaladda hadda jirta ee la xiriirta Cudurka COVID-19 iyo in uu sare u qaado kahor tagga Cudurkan.
Wuxuu kaloo Shiinuhu ka shaqeynayaa in Dunida ay ka baxdo Xaaladdan kala guurka ah, isagoo kobcinaya Dhaqaalaha Caalamka oo ay ka mid yihiin Horumarinta Dalalka ay saameynta ku yeesheen Xaaladahan guud ahaa.
Sida aan ognahay Dowladda Soomaaliya waxa ay si wanaagsan uga shaqeysay Qorshaha Horumarinta Qaranka.
Sanadkan kaddib, markii uu dilaacay Cudurka COVID-19, Shiinaha waxay Soomaaliya ka caawisay la dagaallanka Cudurka COVID-19, anagoo Daagaal adag kula jirna Xanuunkan, haddana Soomaaliya waxay eheyd Istaraatiijiyadda Madaxwayne Xi Jinping ee la dagaalanka Cudurkan.
Markaan dib ugu noqdo Xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya waa mid Mudda Dheer soo jiray oo taariikhi ah,waxaana rajeynayaa inuu sii jiri doono.
Tan iyo markii uu abuurnay Xiriirka Diblamaasiyadeed ee Labadda Waddan dib u abuurmay laga soo bilaabo 1960-kii llaa iyo 1991-kii, Dowladda Shiinahu waxaa ay Soomaaliya ka fulisay Mashaariic Caafimaad oo ay ku jireen 13 Koox oo fulinayay Mashaariicda, waxaa ku jiray in ka badan 377 Adeegayaal Caafimaad oo yimid Soomaaliya si ay wax ugu qabtaan Dadka, Ujeedku wuxuu ahaa Xoojinta Xiriirka Bulshada iyo Sameynta Mashaariic waxtar u leh Bulshada Soomaaliyeed.
Dowladda Shiinihu waxay Deeq Waxbarasho oo joogta ah siisaa Dhallinyarada Soomaaliyeed ee doonaya Waxbarashada, Dowladdeenu waxay u diyaarisay Jaamacadaha ugu wanaagsan Shiinaha si kor loogu qaado Aqoonta iyo Xirfadaha Dadka Soomaalieed, Sanad Walba ayaan bixinaa Deeqo Waxbarasho oo lacag la’aanta ah.
Sidaad ogtahayna, Dhallinyarada Soomaaliyeed ee waxbarata Kaalin Weyn ayay ka qaadan karaan Badalka Xiriirka Labada Dal, Ardayda Soomaaliyeed waxay Fursad u heystaan in ay wax ku soo bartaan Shiinaha.
Haddaanu nahay Dowladda Shiinaha Gacan Weyn ayeynu ka geysanaynaa in la soo saaro Awoodda iyo Kartida Dadka Soomaaliyeed, iyaddoo loo marayo Waxbarashadda iyo Xiriirka soo jireen ah.
Dhanka Nabadda iyo Amniga
Sidaan ognahay tan iyo 2008 Dowladda Shiinuhu waxaa ay Soomaaliya u soo direysay Ciidamo ilaaliya Biyaha Soomaaliya ilaa Gacanka Cadan, si looga hortago loolana dagaalamo Burcad Badeedda ilaa iyo hadda wey ku suganyihiin.
Sidaad ogtahay 2014, waxaan si rasmi ah dib loogu soo celiyey Safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya Magaaladda Muqdisho si loo horumariyo Xiriirka soo jireenka ah ee Labada Dal. Dowladda Shiinuhu waxaa ay taageero xooggan ka siinaysa Soomaaliya Xasiloonida, Nabadda, iyo Dib-udhiska.
2015-kii Hotel ku yaala Muqdisho oo qeyb laga dajiyay Safaradda Shiinaha ee Soomaaliya si loo adkeeyo Xiriirka iyo Taageeradda la siinayo Soomaaliya. Waa la weeraray, waxna la gaarsiiyay, balse Safaaradda Shiinuhu way sii joogtay Muqdisho si kor loogu qaado Garab Istaaga Nabadda iyo Dib-udhiska Soomaaliya.
Sida aad ogtahay, Weerarkii Waqtigaasi wuxuu ahaa mid taabtay Safaaradda Shiinaha laakiin waxaan dooranay in aan sii joogno Soomaaliya oo aanu Weerarka na saameyn waliba Waqti adag, dhinaceena Shiinaha waxaanu iminka kor u qaadaynaa Xiriirka Labada Dal, waxaan qabnaa Dareen Qota Dheer oo ku dhisan Saaxiibtinimada Soomaaliya
Shiinuhu wuxuu leeyahay Mabaadii’ ku dhisan Xiriirkeeda Soomaaliya si loo adkeeyo,
Waxaa Mabda’a Kowaad ee Dowladda Shiinaha yahay in la taageero Nabadda , Dib-udhiska iyo Horumarka Soomaaliya.
Mabda’ Labaad waa in la dhowraa Gobonimada iyo Madax Banaanidda Siyaasadeed iyo tan Dhuleed ee Somaaliya.
Waa Ilaalinta Lahaanshaha Soomaalida Arrimahooda Masiiriga iyo Hoggaankooda.
Mabda’ ku-xiga ee Dowladda Shiinaha waa in Dadka iyo Dowladda Soomaaliyeed laga taageero Helida Nabad Waarta, Xasilooni iyo Barwaaqo,
Dowladda Shiinaha waxay Soomaaliya urajeynaysa mid soo hagaagta oo la soo noqota Nabad Joogta iyo Horumar.
Mashaariicda uu Shiinaha ka hirgeliyay Soomaaliya
Shiinaha iyo Soomaaliya waxa ay leeyihiin Xiriir Saaxibtinimo oo Qoto Dheer, sida aad ogtahayba Shiinaha waxa uu Soomaaliya ka caawiyay Dib-udhiska Ha’aydaha Dowladda iyo Amniga. Hadii aan fiirino Xiriirkii Hore ee ka dhexeeyay Labada Wadan, Shiinaha waxa uu Soomaaliya ka caawiyay Dhisidda goobo muhiim ah oo ku yaallo Magaalada Muqdisho, waxaa kamid ah Garoonka Cayaaraha ee Muqdisho, Tiyaatarka Qaranka, Cusbitaal Madiina, Wadooyin iyo Goobo kale oo muhiim ah.
Shiinaha waxa uu Soomaaliya ka hergaliyay Garoonka Cayaaraha ee Muqdisho kaasi oo ahaa kan ugu balaaran Geeska Afrika.
Sidoo kale waxaan kuu sheegi karaa in Dalkeenna uu Sooomaaliya ka fuliyay Mashruucyo badan oo ay kamid yihiin Mashruucii Biyo Gelinta, Shiinaha waxa uu Soomaaliya la saxiixday Hirgelinta Mashruucyo muhiim ah. Waxaan dhisinay Buundoonyin. Waxaan dhisnay Goobo Taariikhi ah. Waxaan dhisnay Wadooyin. Waxaan dhisnay Warshado, sida aad ogtahay Dhismooyinkaasi waxa aan ka fulinay qeybo kamid ah Gobolada Soomaaliya sida, ‘Hargeysa’, Boosaaso, Gaalkacyo, Garoowe, Jowhar, Jilib, Baladweyne, Wanlaweyn, Muqdisho iyo meelo kale.
Markii ugu dambeysay ee aan booqday ‘Hargeysa’ waxaan doonayay mashruuc Biyo-gelin kadib markii aan aragnay in meeshaasi ay ka jirto Biyo-yari
Xiriirka Labada Dal
Sida aad ogtahay, Xiriir fiican ayaa nagala dhexeeya Soomaaliya, marka waxaa jiro Dadaalo aan wadno sidii Bulshada Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen Nabad iyo Horumar.
Shiinaha waxa uu Soomaaliya siiyaa Taageero Xoogan si Soomaaliya ay u hesho Nabad iyo Dib-udhis.
Marka la joogo Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay waxaan Diiradda Saarnaa Arimaha Soomaaliya, gaar ahaan Arimaha Amniga iyo Dib-udhiska. Shiinaha iyo Soomaaliya waxa ay iska kaa shanayaan sidii Soomaaliya dib ugu heli laheyd Xasiloonideedii. Sidoo kale ay u Sameeyn laheyd Horumar dhinacyo badan taabanayo.
Soomaaliya waa Dal Muhiim u ah oo ku yaala Qaaradda Afrika, lehna Horumar. Waxa ay leedahay Xeebta Ugu Dheer Qaaradda Afrika oo ah in ka badan 3,000km. Sidoo kale waa Dal Qani ah oo leh Kheyraad Dabiici ah. Waad arki kartaa Soomaaliya waxay horumarin kartaa Dhaqaaleeda sida Tamarta laga dhaliyo Cadceedda iyo waxkasta.
Soomaaliya waa dal leh Luqad u gaar ah iyo Dhaqan intaba. Soomaaliya waxa ay sameysay Horumar muuqda, sida aan ognahay Hoggaanka dalka waxa ay xaqiijiyeen horumaro ay ka mid yihiin Nabadda iyo Horumaro kale. Sida aad ogtahay Soomaaliya iyo Shiinaha waxay wadaagaan xiriir Walaaltinimo oo wanaagsan. Sidaa darteed Labada Dhinacba waxay gaareen Guulo kala duwan, gaar ahaan Sanadkii 2013 oo ay Labada Dhinacba kala saxiixdeen Heshiis.
Waad ogtahay in Soomaaliya ay muhiim u tahay Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee (FOCAC), sidoo kale waxa ay kamid tahay Saaxibada ugu muhiimsan ee uu Shiinaha ku leeyahay Afrika. Sidaa darteed sida aan ognahay Sanadkan waxaa dhacay Calaamado la taaban karo oo ku saabsan Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika.
Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee (FOCAC) waxay dhiseeysaa gacanna ka geysaneysaa xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashi ee u dhxeeya Shiinaha iyo Afrika.
Sidaa darteed Soomaaliya waxay heysataa Kheyraad ay la timid Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika. Shiinuhu wuxuu si diiran u soo dhaweynayaa Wada Shaqeyntaas, waxaana xusid mudan in Soomaaliya ay 20-kii sanno ee la soo dhaafay ay Door Muuqda ku laheyd Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee (FOCAC).
Iyadoo loo marayo Dadaalada Shiinaha iyo Afrika, Shiinuhu wuxuu taageero siiyay Dalal Badan oo Afrika ku yaalla. Sidoo kale Shiinaha wuxuu Mashruucyo lagu dhisayo Dekado, Wadooyin, Garoomo Diyaarado iyo Mashaariicyo kale la saxiixday Dalalka Afrikaanka ah.
Shiinaha waxa uu Xiriir Wada Shaqeeyn ah la leeyahay Wadamada ku mideeysan FOCAC ay kamid tahay Soomaaliya. Shiinaha wuxuu jeclaan lahaa in uu sii Xoojiyo Xiriir dhow ee Somaaliya ee la xiriira Madasha Iskaashiga Afrika iyo Shiinaha.
Dowladda Shiinaha waxay dhiirigelineysaa Ganacsatada Shiinaha inay Maalgashadaan wax soo saarka Kalluunka, iyadoo la diyaar ah dhinaca Tiknoolajiyadda.
Marka Shiinuhu waxaa uu bixin karayaa Tababar Xirfadeed iyo arsamo oo dhinaca Wax Soosaarka Kalluumaysiga la xiirra.
Sida aan ogsoonnahay Soomaaliya waxaa ka jira Fursado Badan oo Ganacsi iyo Horumar la taaban karo, waxaan bartay Saaxiibo Badan oo Soomaali ah intii aan joogay Soomaaliya.
Waxaa jira Ganacsato iyo Shirkado Shiinees ah, kuwaas oo xiiseynaya in ay Shirkado Ganacsi iyo Warshado ka furtaan Soomaaliya. Sidaa daraadeed waxaan dooneynaa in aan Soomaaliya ka furano Kambaniyo Wax Soosaar leh oo ku haboon, islamarkaana Shaqo Abuur u sameeyo Dadka ku nool Gudaha iyo sidoo kalena ka helaan Qalabeyn.
Ganacsatada Shiineeska ah waxa ay Hammi Sare u hayaan in ay Maalgashi ka sameeyaan Soomaaliya, waxay leedahay Dhul ku haboon Maalgashiga iyo Ganacsiga.
Waxaan rajeynayaa in Dowladda Soomaaliyeed ay Xoojiso Amaanka Ganacsatada Reer Shiinaha ee Soomaaliya u imaanaya Xiisahooda Ganacsi iyo Maalgelinta ay hayaan.
Sidoo kale annaga dhinaceyna waxaan u jeedinaynaa Ganacsatada Reer Shiine ee imaanaya Soomaaliya in ay u hogaansamaan Sharciga Gudaha ee Soomaaliya, dhiragaliyaan Wax Soosaarka Gudaha,
Ganacsatda Reer Shiine waxaan kale oo aan u jeedinaynaa in ay Gacan ka geystaan Horumarka Bulshooyinka Gudaha Soomaaliya si Ganacsigu noqdo mid laga wada Faa’iido.
Sidaad la socoto, Soomaaliya waa Gurigayga Labaad aniga ahaan. Sidaa darteed waxaan ahay Milkiile oo kale. Marka dhammaan Walaalaha iyo Asxaabta Taageera Soomaaliya waxaan u sheegayaa, inaan Gacan ka geystay sidii ugu wanaagsaneed ee aan ku dhiirrigelinayo Xiriirka Saaxiibtinimo ee u dhexeeya Shiinaha iyo Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeed aad ayey ugu fiicantahay inaan sii joogo Soomaliya Waqtigan Noloshayda.
Waxaan Goobjoog u ahay Soomaaliya oo Horumar ka sameysay Nabadda, Dib-udhiska Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Horumarka Bulshada, Xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya waxay qeyb ka wada yihiin Saddex Heshiis Iskaashi oo isugu jira Heer Gobol iyo mid Caalami ah waxaana ka mid ah;
1) Heshiisika Madasha Iskaashiga Afrika iyo Shiinaha FOCAC
2 Heshiiska Iskaashi ee Shiinaha iyo Carabta
3 Heshiiska Iskaashi ee Belt and Road
Sidaa darted waxaan kuu sheegayaa Sababta aan u joogo Soomaaliya Habeen iyo Maalin inay tahay Ka-shaqaynta Horumarinta Dadka iyo Dalka Soomaaliyeed dhinac walba. Aragtida dheer aan ka qabo waxay tahay Soomaaliya oo ah Dal Nabadeed, Xasiloon oo hurumarsan. Sidaas darteed waxaad la socotaa in Shiinaha ay qayb ka tahay Horumarka Soomaaliya. waxaan Soomaaliya ka caawinay Horumarinta Dhismaha sida Wadooyinka. Waxaa kala talinay Arrimaha Nabadda oo qayb wayn ka ah Horumarka Soomaaliya.
Fursadaan waxaan jeclahay in aan uga faa’iidaysto Qiritaanka Xiriirka Duqa ah ee aanu Waqti Dheer la leenahay Soomaaliya.
Ugu dambeyn aniga oo ku hadlaya Afka Dowladayda, waxaan jeclahay in aan iraahdo Shiinuhi wuxuu diyaar u yahay Horumarinta iyo Xoojinta Xiriirka Qotada Dheer ee nagala dhexeeyo Soomaaliya, waxaan kalsooni ku qabaa in Calaaqaadka Labada Dal uu noqon doono mid sii xoogeysta weligii. Waxaan leeyahay Ha Waaro Xiriirka Shiinaha iyo Soomaaliya. Waxaan u rajeynayaa Dadweynaha Shiinaha iyo Soomaaliya Horumar, Barwaaqo iyo Iskaashi Waara, Lixdan Guuro Wanaagsan Mahadsanid.